JJA ရုပ်မြင်သံကြား၌ AJA Gear သည်ဘီးများကိုအမဲလိုက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Aja ဂီယာ Janta တီဗီမှာဘီး Greases
နယူးဒေလီအခြေစိုက် 24 /7သတင်းရုပ်သံလိုင်း Janta တီဗီတစ်ဦးမှတဆင့်နောက်ဆုံးပေါ်လက်ရှိဖြစ်ရပ်များကိုအသိပေးဟိန္ဒူစကားပြောပရိသတ်တွေစောင့်ရှောက် ဂြိုဟ်တု ကွန်ရက်များပေါ်တွင်အစာကျွေးခြင်း Tatasky, Hathway နှင့် den likes ။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းလည်းမကြာသေးမီကတက် YouTube နဲ့ Facebook ကိုဖြတ်ပြီးက၎င်း၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုစုပေါင်း 100K subscriber များအား (နှင့်ရေတွက်) မှတိုက်ရိုက်ကြီးထွားလာ၎င်း၏လူမှုရေး streaming များမဟာဗျူဟာညှိပြီးသိရသည်။ ၎င်း၏ကြီးထွားလာပရိသတ်ကို၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးဖို့, Janta တီဗီမကြာသေးမီကအသစ်တခု, ပိုကြီးတဲ့စတူဒီယိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းပြုလုပ် KUMO router များ, Ki Pro ကိုမှတ်တမ်းတင် / ပြန်ဖွင့်ထုတ်ကုန်, streaming ကိရိယာများ, FS frame ကိုထပ်တူပြုထားသ, openGear converter ကိုကတ်များနှင့် Mini-converter အပါအဝင် Aja ကနေဂီယာတစ်ခုအိမ်ရှင်, ရွေးချယ်ခြင်း၎င်း၏နည်းပညာအခြေခံအဆောက်အဦများပြင်ဆင်။
Janta ဂရုတစိုက်ကြောင့်ထိုသို့စမ်းသပ်မှုများကာလအတွင်းပြသသည့်အစိုင်အခဲစွမ်းဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့် output ကို၎င်း၏ရွေးချယ်စရာအကဲဖြတ်ပြီးနောက် Aja ဂီယာသုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းချန်နယ်၏ကျောရိုး Aja ဂီယာပြုလုပ်ခြင်းမရှိသေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဒါတည်ငြိမ်သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်အများကြီးကယ်တင်, အထူးသဖြင့်အများဆုံးထုတ်ကုန်အပေါ် LAN interfaces နှင့်အတူကြောင့်, webserver built-in ခဲ့, သင်အလွယ်တကူဖွင့်အကြောင်းကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအနေဖြင့်မည်သည့် platform ပေါ်တွင်တစ်ဦးကို web browser ကိုအားဖြင့်သင်တို့၏ devices တွေကို configure and ထိန်းချုပ်နိုင်, "Deepak Sengupta, Group မှနည်းပညာဆိုင်ရာဌာနမှူး, Janta တီဗီ shared ။
နှစ်ဦးစလုံးဟာ ဂြိုဟ်တု နှင့်လူမှုရေး feeds တွေကို chroma ဖန်သားပြင်နှင့် fixed နောက်ခံနဲ့ရီးရဲလ်သတ်မှတ်မည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်စတူဒီယိုအပါအဝင်သုံးကင်မရာစတူဒီယို setup ကိုစွမ်းအားဖြင့်နေကြသည်။ ကင်မရာအချက်ပြမှုများကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ On-site ကိုထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့အခန်း (PCR) တွင်တစ်ဦး Aja KUMO 3232 Router ကမှတဆင့်တိုက်ကျွေးနေကြသည်။ KUMO PCR အစီအစဉ်ကိုမော်နီတာ (PGM) များအတွက်လေး-port ကိုစားသုံးမိပါစနစ်နှင့်တစ်ဦး Aja Ki Pro ကိုသိုလှောင်ဆင်မှတ်တမ်းတင် / ပြန်ဖွင့် device ကိုချိတ်ဆက်သုံးစွဲအဖြစ်ခြောက်လ Aja ဩဃ-3G-AMA openGear 3G-SDI Analog စအသံဖိုင်ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ အသုံးပြု. ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုခလုတ် / Dashboard ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ disembbeders ။ အဆိုပါဩဃ-3G-AMAs ထို့နောက် Aja ဩဃ-3GDA openGear 3G-SDI reclocking ဖြန့်ဖြူးချဲ့စက်များနှင့်အကျိုးရလဒ်များမှတဆင့်အချက်ပြမှုများကိုရှောက်သွားနှစ်ခု MCR ပလေးအောက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက် Aja KONA I / O ကတ်များနှင့်အတူတစ်မာစတာထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်း (MCR) ခလုတ်သော်လည်း run နေကြသည်နှင့် တစ်ဦး WASP 3D ဂရပ်ဖစ်ဖြေရှင်းချက်ကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက် PCR PGM ။
အဆိုပါ WASP လက်ငင်းဩဃ-3GDAs မှတဆင့် run ပြီးရင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုအချက်ပြသည့်အဘို့အကာ Aja FS ဘောင် synchronous နှင့်အန်ကုဒ်မှတစ်ဆင့်စေလွှတ် ဂြိုဟ်တု အစာကျွေးခြင်းနှင့် Aja HELO အစစ်အမှန်အချိန်ကနေတဆင့် Facebook မှာတိုက်ရိုက်စီးအတွက်ကိရိယာ streaming ။ ဧည့်သည်အင်တာဗျူးများလည်း Skype ကိုအင်တာဖေ့စနေတည်ငြိမ် signal ကိုနှင့်ဘောင်နှုန်းကိုထုတ်လုပ်ဘို့ Skype ကိုတစ်ဦး Aja ဦး-TAP SDI ကို USB 3.0-powered ထည့်သွင်းသည့်စက်ကိရိယာနှင့်တစ်ဦး Aja ရွယ် Mini ကို-Converter ပေါင်းစပ် အသုံးပြု. တစ်ဦးချင်းစီထုတ်လွှင့်သို့ပေါင်းစည်းနေကြသည်။ အားလုံးရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ထားသောနှင့် Apple နောက်ဆုံးဖြတ် Pro ကို X ကိုဖြတ်ပြီးတော့သိမ်းဆည်းထားနှင့်မော်ကွန်းတင်နေသည်။ Janta ဂရပ်ဖစ်အလုပ်လုပ်အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် 10 မှပံ့ပိုး 35 လူတွေမှတက်နှင့်အတူတစ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အိုင်တီအဖွဲ့အကြားပမာဏလူငါးဦးအား 15 cameramen ထိန်းညှိကစား။
"Aja ရဲ့ဂီယာတံခါးဝမှထှကျစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်း Aja ရဲ့အာမခံအစီအစဉ်ကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်သာ။ Setup ကိုများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက် openGear ကတ်များ, ဦး-ဘုံဘိုင်, HELO, Ki Pro ကိုသိမ်းတန်း, FS devices များနှင့် Mini-converter မှတဆင့် KUMO 3232 နှင့်၎င်း၏အဖော် KUMO Control Panel ထဲကထံမှရိုးရှင်းသောခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်ကဂီယာနှင့်အတူအသုံးပြုမှုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားဖို့မျှော်လင့်, "Deepak Sengupta ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-15
ယခင်: စတူဒီယို Manager ကို / ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလက်ထောက်
နောက်တစ်ခု: ဒစ်ဂျစ်တယ် 8K HEVC Media Player ကိုသြဇာ Aja KONA5နှင့် Corvid 88 မြန်ဘို့လည်, Flexible I / O